पक्कै पनि महिलाका त्यसप्रकारका क्रियाकलापले बनिबनाउ परिवार, सामाजिक सम्बन्ध र बच्चाहरूको हुर्काइमा निकै अप्ठ्यारा, जोखिम र विघटन ल्याइरहेछन् । त्यसैले त नेपाली समाजको बहुसंख्यक हिस्साले त्यस्ता महिलालाई खराब वा ‘चरित्रहीन’ का रूपमा बुझ्दै प्रचार गरिरहेछ । यहाँसम्म कि, विश्वविद्यालयबाट दीक्षित युवा पुरुष पनि आफूलाई बाई बाई गर्ने पूर्वप्रेमिकालाई खराब नै ठान्छ ।
त्यति बेला आजको जस्तो घर भताभुंग हुने गरी महिलाहरूको गतिविधि देखा पर्दैनथ्यो । श्रीमान् विदेश गएकाको प्रसंगलाई एकातिर राख्दा, बिहे नै नगरेका शिक्षित युवती र मध्यम वर्गदेखि पुँजीपति वर्गसम्मका विवाहित महिलामध्ये प्रवृत्तिका रूपमा गणना गर्न लायक एउटा हिस्सा पनि पटक पटक प्रेमी फेर्ने र लोग्ने हुँदाहुँदै व्यभिचार भनिने यौन गतिविधिमा संलग्न हुने गरेकै मानिन्छ ।
जुन घर भत्किन लायक नै छ भने त्यसलाई चाँडो भत्काउन किन नखोज्ने ? जुन समाज महिलाका निम्ति झ्यालखानाबाहेक केही होइन, त्यो समाजमाथि आएको अनिष्टलाई स्वागत पो किन नगर्ने ? धेरै मानिस तर्क गर्छन्– बाबुआमाबीच सम्बन्ध अन्त्य हुँदा बच्चाहरूमा असर पर्छ, घर भताभुंग हुँदा महिला–पुरुष दुवैको जीवन लथालिंग हुन्छ । हो, पुरानो संरचना र सोचमा उभिएर हेर्दा यस्तो देखिन्छ र हुन्छ नै तर के परिवर्तनका लागि विद्रोह हुँदा बलिदान अनिवार्य हुन्न ?
समाजको पींधबाट सुरु हुने समाज परिवर्तनको यात्रा दस्ताबेज र पार्टी बनाएर सुरु हुँदैन, त्यो त वास्तविक जीवन व्यवहारमा पर्ने टकरावहरूबाट सुरु हुन्छ । त्यस्ता पात्रहरूको विद्रोहपछि नै राजनीति, संगठन र त्यसको नकार वा सकारमा कानुनहरू जन्मछन् । हिजोको मुलुकी ऐनको वैचारिकीमा उभिएर हेर्दा आजका ती महिला ‘चरित्रहीन बाइफाले’ हुन् तर भविष्यमा गएर हेर्दाचाहिँ समाज व्यवस्थालाई समानतातिर जान झकझकाउने विद्रोही हुन् ।